Ndụmọdụ maka Nnukwu anụmanụ anụmanụ - LucidPix
Ndụmọdụ maka Nnukwu imalmụ anụmanụ
Mụ anụmanụ bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa ịse foto, ma ha bụ anụ ọhịa ma ọ bụ anụ ụlọ gị. Lee ndụmọdụ ise iji nyere gị aka iwere foto anụmanụ kachasị mma yana ihe atụ iji gosi gị ihe kachasị mma!
Ndụmọdụ nke 1: Lekwasị anya na anụmanụ
Ọ nwere ike ịdị nfe, mana hụ na isiokwu gị gbanyere ezigbo aka. Nkọwa nke agbakwunyere na-elebara anya na mgbado dị nro nwere ike inyere aka mee ka foto gị pụta mma. Ọ bụrụ na ị na-agbapụ ọkụ dị ala, gbalịsie ike hụ na anụmanụ ahụ dịgidere n ’ụzọ o kwere mee, iji gbochie nchapụta ọ bụla ma ọ bụ enweghị nkọwa zuru ezu. Idobe anumanu n’etiti etiti a ga-eme ka ọ bụrụ ebe a na-ahụ maka foto ahụ, ma hụkwa na atụnyekwara anụmanụ niile na ntụgharị 3D.
Nke 2: Mee Anụpụ Anụmanụ pụọ
Were foto nke anụmanụ gị n'ihu nzụlite iche. Ime ka anumanu puta ihe n’azu nwere ike inye aka mee ka uche gi mara n’okwu gi ma n’egosiputa ihe ndi ahu bu n’obi. Iji ezigbo ndabere nwere agba nwere ike hụ na anụmanụ ahụ anaghị efu ma ọ bụ agwakọta n'ọnọdụ zoo.
Nkeji 3: Nwalee Ọnọdụ Dị Iche
Dị ka ndị mmadụ, ụmụ anụmanụ na-enwekarị “ezigbo akụkụ” mgbe a na-ese foto. Nyochaa akụkụ dị iche iche mgbe ị na-ese foto nwere ike inyere gị aka ịchọta echiche kacha mma maka anụmanụ ahụ. Maka anụmanụ dị ogologo, dị ka giraff, ị ga-ehulata na ikpere gị ma see foto n'ihu, na-emesi ike n'olu ha. Ijide foto site na iji akụkụ akụkụ isiokwu gị nke ọma nwere ike ijide nkọwa nke agaghị ahụ ụzọ ọzọ. Anweta ntakịrị ọdụm site na ntakịrị ntakịrị nwere ike ịme foto 3D na-adọrọ adọrọ. Nke a bụ nnukwu ụzọ iji weghara njirimara nke ọdịdị ihu na anụ ọ bụla nke anụmanụ.
Nke 4: Nweta Otu Mgbasa
Ogbugba nke anumanu bu nnukwu uzo iji kọọ akuko n’ime otu foto. Can nwere ike ịpị foto nkịta gị na-atụgharị n'ime ahịhịa, pusi na-egwuri egwu, ụmụ nnụnụ na-efe efe na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-ese foto nke anụ ọhịa, jide n'aka na ị na-asọpụrụ anya anụmanụ ahụ ma nọrọkwa na nchekwa ka ị na-ejide ọfụma zuru oke. Ihe atumatu omuma nke umu anumanu na agbanwegharia n’ime onyonyo 3D di uto, ya mere gbaa oso ma tinye ya na ngwa LucidPix iji hu isi okwu gi!
Ntuziaka Mbido LucidPix →← Ebe kachasị mma ị ga-eleta na !tali!
5 Parallax Effective iPhone ngwa iji bulite foto gị